Vehivavy ao Shily nahatsangana vondrom-piarahamonina mahomby amin’ny alalan’ny radio · Global Voices teny Malagasy
Yankee Lima Chile no klioba radio vehivavy voalohany eto an-tany
Voadika ny 06 Aogositra 2021 3:57 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Ελληνικά, Português, Español
Sary famantarana Yankee Lima Chile, nahazoana alalana.
Any anjoro lavi-dalan'i Shily any i Leticia San Martín Corrial no mamelona ny radio-ny [amateur=amateora] ary miandry olona hiserasera any amin'ny tendrony iray hafa. Rehefa nahare poapoa-tabataba tao amin'ny radio izy dia nihiratra rehefa nahare ny feon'ny mpitia radio toa azy avy any Meksika, Torkia na Lithoania.
“This is XQ4NUA,” [XQ4NUA ity] hoy ny hiakan'i Leticia, manolotra ny mari-pamantarana azy manokana manondro azy ho mpikirakira radio [amateora], izay matetika voatondron'ireo aficionados amin'ny voambolana ham radio. Afa-miantso tobim-pampielezampeo voatokana ireo olona manana fahazoan-dalana ham radio ary miresaka amin'ny olona any ambadika any toa azy. Maro amin'ireo mpitia radio manerana izao tontolo izao no afa-mihaino ireny resadresaka ireny. Raha miteny espaniola ilay olona amin'ny tendrony iray dia mifanakalo fifampiarahabana ary indraindray tafatsangana ny finamanana iraisampirenena. Rehefa miresaka amin'ny fiteny hafa ry zareo dia mampiasa kaody efa voafaritra manokana. Miteny ry zareo “seventy-three” (amin'ny teny anglisy), izay midika hoe Best regards, ohatra, ary avy eo miteny hoe “good luck.”
Ireo mpikarakira Ham radio dia ireo tsirairay miezaka hihaona amin'ny olona amin'ny tontolo azo antoka, ary mahafantatra ry zareo fa manana fikasana mitovy amin'izany ao an-tsaina ilay olona hafa mifampiresaka aminy. Ny faharetana ilaina hamolavolana rojom-pifandraisana amin'ny fihainoana ny feon'ilay olona iray fotsiny dia mety hanampy zavatra kely amin'ny mpitia fifandraisana amin'ny radio. Miditra fifandraisana manokana amin'ireo mpitia radio ny mpikirakira, eo amin'ny firenena misy azy sy manerana izao tontolo izao, amin'ny fampiasana maridrefy radio (iray).
Mpikambana ao amin'ny Yankee Lima Chile. Tambatsary avy amin'i CE4YLC nahazoana alalana ny fizarana azy.
“Majika madiodio izy ity,” hoy i Leticia tamiko tao amin'ny Zoom. Rehefa 29 taona nikirakirana ham radio izy, dia nanangana ny klioban'ny radiony manokana, Yankee Lima Chile, ny tokana hany fantatra ho vehivavy ihany no mandrafitra azy.
“Asandratray ho avo ny fifanajana sy ny fifanohanana. Tahaka ny fianakaviana iray izahay. Raha mahatsiaro ho kivy ny iray, ataonay ho antoka ny hiezaka sy hanampy na hiantso mba hanome teny fampaherezana vitsivitsy,” hoy i Leticia nanazava.
Tsy mitovy amin'ny tambajotra sosialy ankihihihy [nomerika] ny ham radio fa faribolana mikatona: mila mahazo lisansa avy amin'ny fahefana mpandrindra ao amin'ny governemanta ny mpikambana rehefa afaka fanadinana amin'ny fenitry ny radio sy ny teknolojia. Leticia no vehivavy voalohany tao Shily nahatratra ny laharana ambony indrindra teo amin'ny tontolon'ny radio amateora manerantany, ny dingana “Advanced Operator“.
Noho ny fisian'ny valan'aretina, vao maika nahazo hery ny fitiavana azy.”Vao maika mampitombo ny fampiasana azy ny fiasana avy ao an-trano, araka izay ataoko, ny zavamisy tsy ahafahanao mivoaka noho ny fanokana-monina anao,” hoy i Leticia nanazava. “Mihevitra aho fa amin'ny lafiny sasany, ny areti-mandringana no nanamora antsika ho eo amin'ny radio, ho afa-mandray anjara. Ary misy tambajotram-pahamehana ihany koa ao.”
Ao anatin'ireny resaka ireny, tsy misy fetrany ny politika, fivavahana ary fihariana fa lalao madio kosa ny firenena, ny fomba ary ny (asa) atao. Voalamina ihany koa ny asa amin'ny radio, toy ny votoaty, fanomezana sertifikà, asa izay ahafahan'ny mpihaino mianatra toerana iray mahaliana ao amin'ny firenena, tranga ara-tantara, na tsingerintaonan'ny Klioba Radio iray.
Mbola noraisina nandritra ny antsafa nifanaovan'i Melissa Vida tamin'i Leticia San Martín Corrial tao amin'ny Zoom.
“Raha manomboka antso iray aho, tsy fantatro izy rehetra, fa te-hiresaka tsy manavaka toby aho, tsy manavaka firenena. Ka miandry ianao ary tampoka eo mahazo valiny avy amin'i ecoalfa: ‘Ako, ako?’ Toby iray any Espaina no mamaly. Raisinao ny antso famantarana azy ireo, ary omenao azy ireo ny anao. ‘Leticia no anarako, miorina an-tanànan’ i Racangua, 85 km atsimon'i Santiago de Chile aho ary miantso mba hifanakalo teny vitsivitsy’. Ary amin'izany no hanombohan'ny resadresaka.”
Eo ho eo amin'ny 6.500 eo ny mpikirakira ham radio eto Shily ary telo tapitrisa manerana izao tontolo izao, ny ankamaroan'izy ireo ao Etazonia, Eoropa ary Azia. Eo amin'ny 15 isanjato monja amin'ny mpikirakira amateora ihany no vehivavy. Ny mampiavaka ny klioban'i Leticia dia noho izy vehivavy ihany no mandrafitra azy, ahitana mpikambana manomboka amin'ny 14 taona ka hatramin'ny efa zokiolona. Ahitana vehivavy 22 ao amin'ny vondrona izay niforona tamin'ny taona 2018.
Leticia (izquierda, arriba) sy ireo mpikambana hafa ao amin'ny Yankee Lima Chile. Tambatsary avy amin'ny CE4YLC nahazoana alalana.
“Ity irery no tokana eto Shily ary misy miteny hoe manerana izao tontolo izao mihitsy. Manana tanjona tokana izahay rehetra, dia ny hiresaka amin'ny radio, hanao activités (asa-alavoly iarahana), manao izay hamantarana anay ho vehivavy, ary dia manome fikasohana tsara amin'ny radio izany, satria amin'ny ankapobeny dia lehilahy daholo (no miresaka). Fa tsy eto, betsaka kokoa ny vehivavy,” hoy i Leticia.
Misy dikany ny anarana fiantso ny klioba radiô-ny, CE4YLC. “CE” manondro ny firenena, “4” ny faritr'i Rancagua, ary “YLC” no anaran'ilay klioba radio (Yankee Lima Chile). “YL” avy amin'ny Young Lady, anaram-bositra lany andro ho an'ireo vehivavy mirotsaka amin'ny ham radio.
Efa mihanaka any amin'ny mpihaino tanora kokoa ihany koa ny ham radio.
“Maro ireo olona mihevitra fa maty noho ny aterineto ny ham radio,” hoy i Leticia. “Saingy tsy marina izany, satria misy ihany koa ny ankizy mirotsaka amin'izao fotoana.” Manan-janaka 14 taona izay vao lasa mpikambana ao amin'ny kliobany i Leticia. Ankafiziny ny “mihaino ny tabataban'ny radio, sahirana mitady izay ifandraisana, ary avy eo miresaka amin'ny olona any lavitra any,” hoy i Leticia.
“Ho eo hatrany ny radio ary havitrika hatrany aho. Ny tiako lazaina, mety ho tapaka ny aterineto ary dia izay no izy. Tapaka (mangina). Tsy maintsy miandry ianao. Amin'ny radio kosa, etsy andanin'izany, tsia tsia, afaka mampiely feo mandritra ny ora maro tsy misy herinaratra ianao, ary dia mbola mahafinaritra kokoa aza. Mihaino fotsiny ianao, fa tsy mahita ilay olona.”
Manampy ny ham radio rehefa misy voina voajanahary na fahatapahan-jiro – fantatry ny sampan-draharaham-pirenena misahana ny vonjy voina ny klioba CE4YLC. “Izahay no voalohany mandefa ny fifandraisana rehefa maty ny jiro, ary mavitrika sy (vonona) hatrany izahay,” hoy i Leticia. Nandray anjara ihany koa ry zareo mitady izay mbola velona tamin'ny horohorontany nampihovitrovitra an'i Shily tamin'ny taona 2010.
“Mampanankarena ny fanahiko sy ny (herintsaiko) ny ham. Mamelona anao izany, mampavitrika anao, manana namana maro manerana izao tontolo izao, manangana rojom-pifandraisana tsy mety tapitra. Tena mahafinaritra izany,” hoy i Leticia nizara.
Tamin'ny 18 avrily no nankalazaina ny andro iraisampirenena ho an'ny mpankafy Radio. Nandefa firariantsoa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ny sakaizan'ny Yankee Lima Chile: